Sorona Masina ny 16/06/2019 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 16/06/2019
ALAHADY MANARAKA NY PANTEKOTY — Taona D
ANDRIAMANITRA TOKANA FA OLONA TELO
Ry Andriamanitra Ray ô, nirahinao ho eo amin’izao tontolo izao ny Teny mpitory ny fahamarinana sy ny Fanahy Loharanon’ny fahamasinana, hanambarànao amin’ny olombelona ny tena fiainanao Andriamanitra; koa ampio izahay hijoro ho vavolombelon’ny finoana marina, ka hankatò ny voninahitry ny Olona telo samy mandrakizay, ary hitsaoka ny herinao Andriamanitra tokana avo indrindra.
Oh. 8, 22-31
Talohan’ny niandohan’ny tany, dia efa teo ny Fahendrena.
Izao no lazain’ny Fahendren’Andriamanitra: Nanana ahy hatramin’ny fiandohan’ny lalany ny Tompo, dia talohan’ny asany ela indrindra. Efa niorina hatramin’ny mandrakizay aho, hatramin’ny voalohany, talohan’ny niandohan’ny tany. Tamin’ny namoronana ahy, tsy mbola nisy ny hantsana, tsy mbola nisy ny loharano nitoeran-drano. Talohan’ny nanorenana ny tendrombohitra; talohan’ny havoana, dia efa teraka aho; fony tsy mbola nisy nataony na ny tany na ny tany lemaka, na ny zavatra iforonan’ny vovok’izao tontolo izao. Efa teo aho, fony Izy nandamina ny lanitra, fony Izy nanoritra faribolana tambonin’ny hantsana, fony Izy nampitoetra ny rahona eny ambony; sy namolaka ny loharano avy amin’ny hantsana, fony Izy nanisy faritra ho an’ny ranomasina, mba tsy hihoaran’ny rano ny morony; fony Izy nandatsaka ny fanorenan’ny tany. Izaho dia niasa teo anilany, niravoravo isan’andro isan’andro, nilalao teo anatrehany mandrakariva, nilalao teo amin’ny gilôbin’ny taniny, ary nahita fahafinaretana teo amin’ny zanak’olombelona.
Sal. 8, 4-5. 6-7. 8-9
Fiv.: Ry Tompo Andriamanitra ô, ndrey ny harevaky ny Anaranao.
Hoy aho raha mahita ny lanitra nataon’ny tananao aho, ny volana, ny kintana izay namboarinao: Fa mba inona ny olombelona no tsahivinao? ny zanak’olombelona no dia ahinao?
Nataonao ambany kelin’ny Anjely izy, nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana. Ny asan-tananao nomenao hozakainy, ny zavatra rehetra nataonao ambany tongony.
Dia ny omby aman’ondry sy ny bibidia, ary koa ny vorona eny an-danitra, sy ny trondro any an-dranomasina izay miriaria eny ambonin’ny onja!
Rôm. 5, 1-5
Avy amin’Andriamanitra, amin’ny alalan’i Kristy ao amin’ny Fanahy, no ahazoantsika ny fahasoavana.
Ry kristianina havana, efa nohamarinina noho ny finoana isika ka mihavana amin’Andriamanitra, amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika, Izay ahazoantsika manatona amim-pinoana izao fahasoavana itoerantsika tsara izao, sy mifaly amim-panantenana ny voninahitr’Andriamanitra. Tsy izany ihany, fa ny fahoriana aza dia ifaliantsika koa, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga hatsaram-panahy voazaha toetra, ny hatsaram-panahy voazaha toetra mahatonga fanantenana; ary ny fanantenana tsy mba manodòka, satria efa voarotsaka ao am-pontsika tamin’ny Fanahy Masina nomena antsika ny fitiavan’Andriamanitra.
— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hisaorana anie Andriamanitra
Ahy izay rehetra ananan’ny Raiko; ny Fanahy dia handray ny avy amiko, ka hanambara izany aminareo.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny mpianany nanao hoe: “Mbola manan-javatra betsaka holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny; fa rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra, satria tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay rehetra ho reny no holazainy, ary ny zavatra ho avy no hambarany aminareo. Hanome voninahitra Ahy Izy, satria handray ny avy amiko ka hanambara izany aminareo. Ahy izay rehetra ananan’ny Raiko, ka izany no nanaovako hoe: Handray ny avy amiko Izy, ka hanambara izany aminareo”.
Ry kristianina havana, ankalazaintsika anio, miaraka amin’ny fitiavana mampiray Azy, ny Olona telo maha-Andriamanitra: dia ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina; ka miraisa fo isika hivavaka ho an’ny olombelona rehetra mba hihavaozan’ny fianakaviam-ben’izao tontolo izao hanahaka ny Fianakavian’ny Trinite Masina, ka hifankatia sy hihavana ary hifanasoa marina tokoa.
* Mba handalinan’ny Eglizy lalandava ny fampianaran’i Jesoa Kristy, dia mangataha amin’ny Fanahy Masina hanazava an’ireo nomena adidy hampianatra ny finoana.
* Misy mpitondra eo amin’izao tontolo izao manadino fa misy Andriamanitra; koa mivavaha mba hohazavain’Andriamanitra izy, ary ho afaka hivavaka marina ny vahoaka rehetra.
* Maro ireo mbola mitady an’Andriamanitra marina; koa mivavaha mba hiseho aminy Andriamanitra hiadanan’ny fony sy hahasambatra azy.
* Mba hahafahan’ny fianakaviantsika maka tahaka ny fianakavian’Andriamanitra, dia mangataha amin’Izy Tompo mba hamenoany fitiavana sy hampifankazahoany ny olona rehetra, ao amin’ny fianakaviana.
Ry Ray sy Zanaka sy Fanahy Masina ô, anjakan’ny fitiavana ao amin’ny Trinite Masina, ka ampio izahay mba hampiraisin’ny fitiavana, haka tahaka ny fitiavan’Andriamanitra, dia hamirapiratra eo amin’ny olombelona fa Fitiavana Ianao Andriamanitra.
Zanaka ianareo, ka nirahin’Andriamanitra ao anatin’ny fonareo ny Fanahin’ny Zanany miantso hoe: Abà! Ray ô!
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1105 s.] - Hanohana anay